हाइवे पत्रिकाको विमोचन - खबरम्यागजिन
Homeखबरकालेबुङहाइवे पत्रिकाको विमोचन
September 24, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि कालेबुङ 0
कालेबुङ, 24 सितम्बर।
“हाइवेसित हजारौँ मजदुरहरूको जीवन जोडिएको छ। बाटो भत्किएपछि उनीहरूले मरम्मती गरे भने मात्रै लाखौँ सवारी साधनहरूको चलाचल आरम्भ हुन्छ। अरूलाई सुविधा दिन उनीहरूले आफ्नो जीवन खर्चिन्छ। त्यसको बदलामा उनीहरूले के पाए त? केवल एक छाक रोटी? खै तिनीहरूको जीवनको मूल्य? ”
कवि उमेश परियारलाई हाइवेमा कार्यरत यी नै मजदुरहरूको सवालले कुत्कुतायो। र ती सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने योजना हुर्किएपछि निस्कियो ‘हाइवे’ पत्रिका। जुन हिजो कालीझोडामा सार्वजनिक भयो।
कवि उमेश परियारद्वारा सम्पादित एवं साहित्य संरक्षण समिति कालीझोडाद्वारा प्रकाशित ‘हाइवे’ पत्रिकाको आज औपचारिक लोकार्पण भएको हो। कालीझोडा सामुदायिक भवनमा आयोजित कार्यक्रममा सामाजिक संस्था मणि ट्रस्ट कालेबुङका चेयरमेन सुवासमणि सिंह, रम्बी उच्च विद्यालयका भूपू प्रधान अध्यापक प्रेमचन्द्र छेत्री एवं विद्यार्थीद्वारा पत्रिका लोकार्पण गरियो।
‘हाइवे’ पत्रिका निकाल्नुको औचित्यबारे प्रकाश पार्दै सम्पादक उमेश परियारले उक्त कुरा खुलाएका हुन्। उनले अझ खुलाएअनुसार यतिबेला पैह्रो र टिस्टाको जलस्तर बढेकाले राष्ट्रिय राजमार्ग 10 चुडिँदै गरेको अवस्था हो। एनएच 10 छैन भने सिक्किम अनि कालेबुङका लाखौँ जनताको जीवनरेखामा बाधा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यससँग संलग्न क्षेत्रहरू पनि प्रभावित हुने नै हो।
‘हाइवे भनेको सेभोकदेखि रम्फूसम्मको व्यापक क्षेत्र हो’, उनले भने, ‘जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौँ समुदायको विभिन्न किसिमका समस्या छन्। विभिन्न प्रकारको राजनैतिक विसङ्गति र शोषणको कारण उनीहरूको जीवनस्तर उकासिनमा व्यापक बाधा पुगेको छ। उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यहरू पनि उस्तो विकसित भइहालेको छैन। यी तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न एउटा माध्यमको आवश्यक थियो। त्यसकै परिचयात्मक रूप हो ‘हाइवे’ पत्रिका। यस पत्रिका प्रकाशित हुनमा मणि ट्रस्ट चेयरमेन सुवासमणि सिंहको अतुलनीय योगदान रहेको जनाउँदै उनले सिंहप्रति आभार व्यक्त गरे।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि सुवासमणि सिंहले उमेश परियारले गरिरहेको कार्यको सरहाना गरे। पत्रिकामा विद्यार्थीहरूको सिर्जना समावेश गर्नुलाई उनले महत्वपूर्ण कार्य रहेको बताए। अझ रम्फू अनि किर्नेका विद्यार्थीहरू (जो सिक्किमको स्कुल पढ्छन्?) का रचनाहरू पनि पत्रिकामा समावेश गरिए सिर्जनशील विद्यार्थीहरूलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने सुझाव उनले पत्रिका टोलीप्रति राखे।
भक्ति बोगटीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विशाल राईले स्वागत सम्बोधन राखेका थिए भने अरूण घतानी, कवि नारज थापा आदिले आदिले सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा स्थानीय बालबालिकाहरूले नृत्य, गीत आदि प्रस्तुत गरे।